Abasezinhlungwini balinde odokotela abahlinzayo | Scrolla Izindaba
Abasezinhlungwini balinde odokotela abahlinzayo
Bonke balele ewadini elilodwa baphuke imilenze – futhi bonke bakhathazekile ngokuthi isibhedlela sesikhohliwe ngabo.
Laba bantu abayisithupha babandakanyeka ezingozini zangoZibandlela nangoMasingana kanti futhi balele ku-Ward B4 esibhedlela saseHelen Franz e-Bochum, e-Limpopo.
Balinde ukudluliselwa esibhedlela i-Pietersburg Provincial e-Polokwane ukuze bayohlinzwa ngodokotela bamathambo.
Kodwa uMnyango wezeMpilo esifundazweni uthi bayashoda odokotela abahlinzayo futhi abazi ukuthi iziguli zizothola nini izinsuku zokuhlinzwa kwazo.
Njengamanje basaba ukuthi kungenzeka balahlekelwe yimilenze futhi bakhubazeke uma bengakutholi ukuhlinzwa.
Laba bantu bakhulume nabakwa-Scrolla.Africa ngombandela wokuthi bangadalulwa. Bathi bayakwesaba ukuhlukunyezwa futhi baphila ngamaphilisi ezinhlungu ukuze bangazibeki engcupheni.
Esinye seziguli, esisuka e-Indermark ngaphandle kwase-Bochum, sithe singeniswe esibhedlela ngemuva kokubandakanyeka engozini yemoto eyaphula imilenze yakhe yomibili.
“Ngatshelwa ukuthi ngizoyohlinzwa e-Polokwane ngemuva kwezinsuku ezintathu ngingenisiwe kodwa ngatshelwa ukuthi abekho odokotela abahlinzayo,” kusho isiguli.
“Ngiyesaba ukuthi ngizogcina ngilahlekelwe yimilenze yami yomibili ngoba ayibukeki kahle.”
Esinye isiguli esaphuka umlenze ngesikhathi siwa emngcwabeni sithe sisaba ukuphelelwa ngumsebenzi.
“Laba bantu babukeka bengenandaba. Konke esikwenzayo ukuhlala nje lapha futhi sixoxe. Kubi kakhulu njengamanje njengoba singazitholi nezivakashi,” kusho isiguli.
Okhulumela uMnyango wezeMpilo e-Limpopo, uNeil Shikwambana uthe bayashoda odokotela bamathambo abahlinzayo ngoba zonke iziguli esifundazweni sonke zidluliselwa esibhedlela sase-Pietersburg ukuze ziyohlinzwa.
“Iziguli zizohlinzwa ngokushesha uma kutholakala udokotela ohlinzayo,” kusho uShikwambana.